जनताको मत विना नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाँदैन पूर्वउपसभापति : नविन राई। - Yugantar Khabar | News Portal
Posted on March 6, 2021 by yugantar khabar
काठमाडौं : नेपाली काँग्रेसका सक्रिय युवा नेता तथा पूर्वउपसभापति हुन्, नविन राई । उनको जन्म २०३५ भदौ १५ गतेका दिन चिशंखुगढी ८ माम्खास्थित बुबा देवानसिंह र आमा मायादेवी राईको कोखबाट भएको हो । मिलनसार स्वभावका उनी जस्तो छन् त्यस्तै देखिन्छन् । समाजशास्त्रमा मास्टर्स उनी अध्ययन निरन्तर जारी राख्ने सुनाउँछन् । हजुर बुबा बृटिस सेना र बुबा नेपाल प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो अथवा फौजी परिवार । भन्छन् म आफै पनि आर्मी सेकेण्ड लप्टनमा दुई पटक केसिस गरे मैले भन्नै पर्छ लकले साथ दिएन ।
पारिवारिक राजनीतिको अलावा लिगेसीले सुरुदेखि नै नेपाली काँग्रेसको साधारण सदस्यबाट राजनीति सुरु गरेका उनले लोकतन्त्रमा विस्वास राखी निरन्तर देश, जनता र पार्टीको सेवा गर्दै आएका छन् । ओखलढुंगा का स्व. बलबहादुर राई, गोपाल राई लगायत अहिलेको समकालिन नेताहरुको प्रेरणाले कांग्रेसमा सक्रिय भए । पछि विपी, कृष्ण प्रसाद भटराई, गणेशमान सिंह लगाायतलाई पनि बुझ्ने अवसर पाए । त्यसपछि झन म कांग्रेस प्रति प्रभावित भए । म त्रिचन्द्रको विद्यार्थी । लामो समय साथीहरुलाई सघाईयो ।
नेपाल विद्यार्थी संघको ११ औं महाधिवेशनमा अत्याघिक मतले विजयी भएं । उनले विद्यार्थी भुगोल तथा संगठनबाट राजनीति सुरु गरेका हुन् । साथै राजनीति तथा समाजसेवामा आफु भनेर आउनेलाई हमेसा सहयोग गर्दै आएको छु हामीसंग कुरा गर्दै उनले भने । उनी पार्टीको एक इमान्दार सिपाही हुन् । राजनीति देश र जनताको लागि हुनु पर्ने हो तर त्यसो हुन नसकेकोमा आफु दुखी रहेको समेत सुनाए । नेपाली जनताले दुई तिहाई मत दिएर कम्युनिष्टहरुलाई सत्तामा पुर्याए तर देश र जनताको लागि केही गर्न सकेनन् । अब उहाँहरुले कसैलाई दोष दिने अवस्था छैन ।
पार्टीको अधिवेशन नजिकिदै छ, क्रियाशील सदस्यता र पार्टीको अवस्था के छ नेपाली काँग्रेसको ?
पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नविकरण लगभग टुंगिदै छ । जिल्लामा हाल पार्टीका नेताहरुबीच अभुतपुर्व एकता भएको अवस्था छ । जिल्लामा संग र प्रदेशमा हाम्रो पार्टी पुरै पराजित भएपनि हामी कमजोर छैनौ । वाम एकता मात्र भएको थिएन भने पुरै सेट हामी जित्ने थियौ । तर राजनीतिक परिस्थिति त्यस्तै भईदियो । अहिले हामीले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनुको साथै संगठन मजबुत बनाएका छौं ।
महाधिवेशनमा तपाईको दाबी के हो ?
मैले अहिले नै केही दाबी गरेको छैन । पार्टी भित्र छलफल भईरहेको छ । यसमा जिल्ला पार्टीले मेरो आवश्यकता ठान्छकि ठान्दैन त्यसमा भर पर्दछ । अग्रज नेता, कार्यकर्ता तथा प्रतिनिधिहरुले जे भन्नु हुन्छ म त्यही गर्छु । अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
यस पटक ओखलढंगाा पार्टीले चुनावमा किन हा¥यो ?
चुनाव हार्नुको मुख्यतः तिन वटा कारण रहेका छन् । पहिलो वाम गठबन्धन, टिकट वितरण विवाद रहित हुन नसक्नु, अर्का काँग्रेसको एउटा रोग सबैलाई थाहा छकि पार्टीभित्रकै अन्तरघात । स्थानिय तह चुनावमा पार्टीले राम्रो ग¥यो । त्यसैले आगामी दिनमा बलियो रुपमा प्रस्तुत हुन्छौ । गहिरो चुनावी अनुभव भयो । वामपन्थीहरुले हिजो के के बोले र आज के गर्दैछन् हामी सबैले देखे सुनेकै छौं, त्यसैले ति भ्रमलाई चिर्दै अघि बढ्छौं ।
खासमा नेपाली राजनीति पुरै फोहोरी खेलमा दुबेको छ । कम्युनिष्टहरुले देशलाई वर्वाद बनाईरहेका छन् । अझ संसद विघटन गरेर देशलाई अनिर्णयको भूमरिमा फसाउदै थिए तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जोगाईदियो । सर्वहाराको कुरा गरेर जनतालाई गरिब बनाईरहेका छन् । उनीहरुले राजनीतिलाई पद र पैसा कमाउने मेलो मात्र बनाएका छन् यसको सबै देशभक्तहरुले भण्डाफोर गर्न जरुरी भईसकेको छ । वास्तवमा पुरानो राजनीतिलाई बिश्लेषण गर्ने हो भने अहिलेको राजनीति केही पनि होईन रहेछ । विपीले जस्तो संघर्ष अहिले नेता वा तपाई हामीले गर्न सक्दैनौ । २००७ सालको प्रजातन्त्र ल्याउनेदेखि मोहन शमशेरसम्मको मन्त्रिपरिषद्मा बसेर खेलेको भुमिका तथा सुवर्ण शमशेरलाई मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनेदेखि लिएर २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा दुई तिहाइ सिट विजय गराउँदै १८ महिने सरकार चलाउदा उनले गरेका काम र संघर्षलाई हेर्ने हो भने धेरै सम्झनलायक छन् ।
त्यसपछि तत्कालिन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गरे । त्यस्तो अवस्थामा पनि कहिंकतै विचलित नभई जिवन पर्यान्त संघर्ष गर्नुभयो । उनैले जन्माएको पार्टी देशको ठुलो प्रजातान्त्रिक पार्टी बनेको छ । त्यस्तो गौरवशाली पार्टीको सिपाही हुन पाउंदा गर्व महसुस हुन्छ । यद्यपी पार्टीले धेरै कुरा सुधार गर्न आवश्यक छ । साथै, अहिलेको राजनीति शुद्धिकरण आवश्यक छ । सबै र सबैलाई अट्ने काँग्रेस बनाउन आवश्यक छ ।
नेपाली काँग्रेस झन ईतिहासमै कमजोर अवस्थामा छनि ?
नेपाली काँग्रेस यो देशमा कहिल्यै कमजोर छैन । आफु हारेर पनि संधैं देशलाई जिताउंदै आएको छ । नेपाली काँग्रेस जन्मेदेखि आजसम्म के कति
संघर्ष ग¥यो तपाई हामी सबैले देखे, सुने बुझेकै छौं । २००७ देखि पञ्चायत फाल्ने आन्दोलनदेखि लिएर दुईवटा जनआन्दोलन हुंदै आज देशमा जुन राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, त्यो काग्रेसको कारणले मात्र सम्भव भएको हो । पहिलोे संविधानसभामा कम्युनिष्टहरुले जिते, संविधान दिन सकेनन्, विडम्वना बिघटन नै गरे । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभा चुनावमा नेपाली काँग्रेसले हामीलाई जिताउनुस, हामी संविधान दिन्छौ भन्यौं । नेपाली जनताले हामीलाई ठुलो पार्टी बनाए । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बनायौं । काँग्रेसले देश र जनताका लागि निरन्तर संघर्ष ग¥यो ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा हार्दैछौं भन्ने थाहा हुंदाहुदै पनि देशले निकास पाउनुपर्छ भन्ने हेतु सहित गिरिजाप्रसाद कोइरलाले चुनाव गराउनुभयो । यस पटकको चुनावमा पनि हामीले त्यसै ग¥यांै । बल्लतल्ल आएको संविधानलाई कार्यान्वयन र संस्थागत गर्नुपर्ने अवस्था थियो । वाम गठबन्धन बनिरहेको अवस्थामा हार्छौं भन्ने थाहा हुंदाहुंदै पनि चुनाव गराईयो । आज वाम गठबन्धनले दुनियाँ कुरा गरेर संसदमा दुईतिहाई त ल्याए तर देश र जनताका लागि के गरे त ? संविधान कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो विभिन्न काण्ड मच्चाईरहेको छ ? सुशासनमा सरकार कहाँ छ, कर, महंगी बढिरहेको छ । तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ । एत्रो कोरोना रोग चलिरहँदा जनताले राहत पाउने भन्दा पनि स्वस्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारमा गरे ।
सरकार पुरै असफल भयो भन्न खोज्नु भएको ?
वाम सरकार असफल भयो । जहातही विकृतिविसंगति रहेको छ । देशमा अस्थिर राजनीति चल्न खोजिरहेको छ । यो सरकारले केहि गर्न सक्दैन । खुसी नेपाली सुखी नेपालीको एजेन्डामा चुनाव जितेको वाम गठबन्धनले समृद्धिको कुनै पुर्वाधार खडा गर्न सकेन । बरु उल्टै संसद विघटन गरेर दुनियाँ हँसायो । प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको रेल, पानी जहाज, मोनो रेल र मेट्रो रेल त कहिले हो कहिले । एउटा मेलम्चीको पानी समेत समयमा ल्याउन नसक्नेबाट के आसा गर्ने । उपत्यकामा पानीको एत्रो हाहाकार छ, अब छिट्टै पानी ल्याउछन् भनेको त ठेकेदार कम्पनी नै भाग्यो । त्यहां पनि कमिशनकै कुरा आएको थियो । दुई तिहाईकोे वाम सरकार चलिरहंंदा देश र जनतामा झन् बेहालको अवस्था सृजना भएको छ । सुशासनको अभावमा भ्रष्टाचार झन मौलाई रहेको छ । डण्दहिनता बढेर गएको छ । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भयो, उनको परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाएनन् । न्यारो वडी, वाईडबडीमा त्यत्रो भ्रष्टाचार भएको तथ्याक बाहिर आईरहंदा कसैलाई कारबाही नहुनु यो सरकार भ्रष्टाचारमा कति लिप्त थियो र छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ ।
तर कांग्रेस पनि आन्तरिक द्धन्दमै सिमित देखिए नि ?
तपाईले अहिले भईरहेको काँग्रेसभित्रको गुठउपगुठको कुरा उठाउन खोज्नु भएको होला । नेपाली काँग्रेस एक मात्र पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । यस पार्टीमा सबैलाई आफ्नो कुरा राख्ने स्वतन्त्रता सबैमा छ, त्यसैले लोकतन्त्रको लागि आन्दोलनको नेतृत्व ग¥यौं । तर हामी नै अराजक बन्यौ भने यसको फाईदा अरुले लिन्छन् लिईरहेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीमा जस्तो बोल्नमा बन्देज छैन, हुंदैन । ठुलो पार्टी छ, मनमुटाव हुन्छन्, गुठहरु हुन्छन् । प्रजातन्त्रको सुन्दरता पनि त्यहि हो । आखिर अधिवेशनमा प्यानल हुन्छन्, एउटाले जित्छ, अर्कोले हार्छ । हार्नेले आफ्नो पोजिसन देखाईरहनु ठिकै हालो तर पार्टीलाई घाटा हुने गरी नेताहरु चलिरहंदा आम कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, जनता दुखी हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले आम नेता कार्यकर्ता सच्चिन जरुरी छ ।
काँग्रेसले वाम सरकारको निरन्तर विरोध मात्र गरिरह्यो नि ?
विरोधको नाउँमा विरोध गरिरहेका छैनौ नि । चुनावको बेला हाम्रो पार्टी तथा सभापतिले भन्नुभए जस्तै यदि वामपन्थीहरुले जिते भने रुन पनि पाईदैन, अधिनायकवाद आउँछ भन्नुभएको थियो, भन्दै आउनु भएको छ । आखिर अहिले त्यस्तै अवस्था देख्न थालिएको छ । सडक सरकार उहाँहरुकै हातमा रहेको छ । जग्गा खरिद प्रकरण त्यसरी नै चर्चामा आयो तर कारवाही भएन । प्रतिपक्षी दलका नेताहरु पनि विभिन्न प्रकरणमा सहभागी भएको कुरा आईरहंदा दुईतिहाईको सरकार छ, छानविन गरे भईहाल्यो नि त । उक्त कुरा हाम्रा नेताहरुले पनि भन्दै आउनु भएको छ । तर उहाँहरु काण्डै काण्डमा अल्मलिरहनु भएको छ ।
दुई तिहाईको सरकार छ, जनताको पक्षमा धमाधम काम गरेको भए हुने नि तर त्यसो गरेनन् पार्टी भित्रको आन्तरिक द्धन्द्धमा फसिरहनु भयो । उहाँहरुलेझै हामीले संसद अवरोध गर्ने, सडक आन्दोलन गर्ने, रेलिङ भाँच्ने काम त गरेका छैनौ । यस्तो सजिलो प्रतिपक्ष विश्वमा कहि पनि पाईदैन । राम्रा कामको समर्थन, गलत कामको संसदमा आवाज उठाउने काम त गरेका छौं । तर सरकार गठन भएको तीन वर्षमाएउटा पनि सिन्को भाँच्न सकेको अवस्था छैन । सरकार दिनानुदिन असफल भईरहेको छ । तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा वाम सरकारको गतिविधि राम्रो छैन । अझ प्रदेश सरकार त झन निकम्मा बरिहेको छ । जिल्लामा हामीले कुनै भाँजो हालेका छैनौ । स्थानीय तहमा हामीले जितेका स्थानमा बजेट दिन कञ्जुस गरिएको छ । तर हामीले जितेका ठाउँमा त्यसो गरेका छैनौ । यद्यपी स्थानीय तहमा हामी बलियो अवस्थामा रहेका छौं । हामी निरन्तर संगठन सुदृढिकरणमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छौं ।
तपाईहरुले पनि देश र जनताको पक्षमा केहि गरेन भन्ने आरोप छनि ?
राजनीतिमा यस्तो भईरहन्छ । त्यसैले त मानौं कम्युनिष्टहरुले दुई तिहाई पाए । के कांग्रेसले जति काम गर्न त सकेन । हामीलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ छैन । उहाँहरुको पार्टी भित्रकै आन्तरिक द्धन्द्धले केही गर्न सक्नु भएन जुन कुरा उहाँहरुले नै भन्दै आउनु भएको छ । यो देशमा नेपाली काँग्रेस बिना कुनैपनि आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको छैन । चारजना कम्युनिष्ट नेता प्रधानमन्त्री भए तर संविधान दिएनन्, बरु दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन हुने भयो, हामीले जनतामा भन्यौं कि, नेपाली काँग्रेसलाई जिताउनुस, हामी संविधान दिन्छौ । संविधानसभाबाट संविधान ल्याउन समेत नेपाली काँग्रेस नै चाहियो । अहिले कम्युनिष्टले भने जस्तो समृद्धि पनि काँग्रेसबाट मात्र सम्भव छ । उनीहरुलाई संसदीय व्यवस्थामा हाम्रै पार्टीले ल्याएको हो ।
समाजवाद, बहुलवाद र आर्थिक उदारवादको निती समेत हाम्रै हो । त्यसैले यो देशमा नेपाली काँग्रेस ठुलो योगदान र संघर्ष गरेको छ । आज गाउँ गाउँमा सडक पुर्वाधार पुगेका छन् । विद्युत, खानेपानी, शिक्षा, सञ्चार, वित्तिय संस्था आदिमा जुन प्रगति भएका छन्, ति सबै नेपाली काँग्रेसकै उदारीकरणको नितीले भएको हो । त्यसैले हाम्रै एजेण्डामा हिडिरहेको कम्युनिष्टहरुसंग हामीलाई डर छैन, तर हामी कम्युनिष्ट अधिनायकवादको सधैं विरोध गर्छौं ।